राजनीतिले मजदूरलाई ध्यान दियो, कृषिलाई दिएन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता राजनीतिले मजदूरलाई ध्यान दियो, कृषिलाई दिएन
अन्तरवार्ता0views
राजनीतिले मजदूरलाई ध्यान दियो, कृषिलाई दिएन
औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका अनेक आयामहरूमा ५० वर्ष बिताएका जगदीशप्रसाद अग्रवाल निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । आफ्नो व्यावसायिक जीवनको करीब साढे २ दशक विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा खर्चिएका अग्रवालले यो औद्योगिक घरानालाई एउटा अग्रणी समूहको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । निजीक्षेत्रका केन्द्रीय सङ्घ÷सङ्गठनहरूको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्वसचिव हुन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाल त्यो संस्थाको संस्थापकमध्येका एक हुन् । विगतमा हेटौंडा उद्योग व्यापार सङ्घमा सक्रिय उनले मुलुककै आर्थिक केन्द्र मानिएको बारा र पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पूरा गरे । नेपाल बेभरेज एशोसिएशनका संस्थापक अध्यक्ष पनि रहिसकेका अग्रवाल म्यानेजमेण्ट एशोसिएशन अफ नेपालका पनि संस्थापक उपाध्यक्ष हुन् । अर्थराजनीतिक विषयमा जानकार उद्यमीको पहिचान स्थापित गरेका ७३ वर्षीय अग्रवाल अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रबन्धन, मानव संसाधन र इतिहासको अद्यावधिक अध्ययन र मन्थनमा बढी रुचि राख्छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले समसामयिक अर्थराजनीति, आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता, सम्भाव्यता, समस्या र निराकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रहेर अग्रवालसित गरेको कुराकानी :
मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसलाई आर्थिक विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ?
सङ्घीयता हाम्रो रोजाइभन्दा पनि आवश्यकता बढी हो । विकासको विकेन्द्रीकरणका लागि यो जरुरी भएको हो । तहगत सरकार बनेर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि नयाँ चुनौतीहरूको शुरुआत हुन सक्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको अवरोध भनियो । अब त्यो भन्न पाइन्न । विकेन्द्रित विकासमा पाइला चाल्दा विशृङ्खलता आउन सक्छ । विकास के र कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि निरूपण भएको छैन । तहगत सरकारका आआफ्नै एजेण्डा हुन्छन् । तिनलाई एकीकृत गरेर एकअर्काका पूरक बनाउन सकेनौं भने समस्या आउँछ । मिलिजुली सरकार बन्ने अवस्था आए त्यसमा पनि सैद्धान्तिक विवाद हुन सक्छ । कोही उदारवादी छन् । कोही नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका हिमायती छन् । केही दुवैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ भन्ने छन् । विप्रेषणको आयले समाज मध्यम वर्गमा पुगिसकेकाले आकाङ्क्षा र आवाज बढ्दै गएको छ । यस्ता विषयको तालमेल शुरूमा केही समस्याजस्तो भए पनि समयान्तरमा सकारात्मक बन्दै जानेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
अबको आर्थिक विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ?
उदारवादी र बजारमुखी आर्थिक विकासको मोडेललाई संसारले स्वीकारेको छ । नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षधरले पनि उदारता अपनाएका छन् । चीन यसको उदाहरण हो । त्यहाँ राजनीति नियन्त्रणमुखी भएर पनि आर्थिक नीति अति उदार छ । चीन यसैको आधारमा विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने होडमा अघि बढिरहेको छ । यो पनि छलफलको विषय भइरहेको छ कि उदारवादले आय त बढायो, तर वितरण ठीकसँग भएन । यसले असमानताको खाडल बढ्यो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुदार अर्थतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
बजारमुखी नीतिमा केही परिमार्जन भने जरुरी छ । पूँजीवाद र समाजवादको मिश्रण आवश्यक छ भन्ने दुनियाँको अर्थराजनीतिले देखाइरहेको छ । सरकारको नियन्त्रण कहाँ हुने र कहाँ नहुने भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अब सङ्घीय संरचनाअनुसार नयाँ सरकार आएपछि यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ । कुनै क्षेत्रमा सरकार आफै जानु पर्छ भने कतिपयमा निजीक्षेत्रलाई खुला छोड्नु पर्छ ।
तर, अहिले देखिएको समाजवादी दर्शनबाट दीक्षित राजनीतिक शक्तिबीचको गठबन्धन र यसको सम्भावित परिणामले नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई बलियो पारेको छैन र ?
यो मेरो पनि डर हो । अहिलेको संविधानमा पनि त्यस्ता शब्द छन्, जसले शङ्का जन्माउँछ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले आफ्नो प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धनका लागि जुन कुरा जति जोडतोडले उठाउनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय पार्टीका नेताले अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा हुनु पर्छ पनि भनेको सुनिन्छ । तर, यो सानो वर्गको सोचाइमात्र हुन सक्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैको यो सोचाइ होला भन्ने लाग्दैन । अर्थतन्त्रमा उदार भएर नै उनीहरूले राजनीतिमा बलियो स्थान बनाएका छन् । अहिले एमालेको जुन शक्ति देखिरहेका छौं, नियन्त्रणवादी भएको भए त्यो अवस्थामा आउने थिएन होला । यसकारण कसैले यो मानिआएको छ भने परिवेशले नै त्यस्तो विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याउँछ । राजनीतिको मूल लक्ष्य जनता र आर्थिक विकास हो । जनताले त्यो पाएन भने विकल्प खोज्छ । अहिलेको राजनीतिले यो कुरा बुझेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रका चौतर्फी आयामहरू परनिर्भर बन्दै गइराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको अर्थराजनीतिबाट सोचेजस्तो विकास गर्न सकिन्छ ?
हो, राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकेको छैन । विकास अनुदान वा ऋणमा चलेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण पनि परनिर्भता नै हो । व्यापारमा परनिर्भरता छ । वर्षेनि घाटा बढिरहेको छ । अति परनिर्भरताले सार्वभौमिकता स्वतन्त्र हुँदैन । हामीले अपेक्षामा राखेको अर्थराजनीतिक विकासका लागि परस्पर निर्भरतामा जोड दिनु पर्छ ।
दुई ठूला अर्थतन्त्रको छायामा रहेर परस्पर निर्भर अर्थतन्त्रको सपना साकार होला र ?
नहुने कुरै छैन । मरुभूमिमात्र भएका देशहरू त्यति परनिर्भर छैनन्, जति हामी छौं । हामीहरूको मनोविज्ञानले परनिर्भरतालाई रुचाउन थालेकाले यो असम्भवजस्तो देखिएको हो । राजनीतिमा इच्छाशक्ति आउनु पर्‍यो । यहाँको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको अधिकतम दोहन हुनु पर्दछ । स्रोतको कुरा गर्दा जलस्रोतको खुबै चर्चा हुन्छ । तर, यसको शुरू नै परनिर्भताबाटै भयो । यसको निकासी गर्ने भनियो । निकासी पनि त परनिर्भरता नै हो नि । अरूले लिएन भने के गर्ने ? यसकारण यसको शुरुआत नै गलत भयो । त्यसैले जलस्रोतको विकास हुन सकेन । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएर पेट्रोलियमको आयात पो घटाउनु पर्ने हो त । कृषिकै कुरा गरौं । कृषिप्रधान देशमा आयातमा पनि कृषि पदार्थकै अंश ठूलो छ । अब परम्परागत कृषि उत्पादन गरेर हुँदैन । यो जीवनयापनमात्र होइन, उद्योगको रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । यो कुरा सरकारले भन्दै पनि आएको छ । तर, यसलाई राजनीतिको माध्यममात्र बनायौं । आम्दानीको स्रोत बनाउन सकेनौं । राजनीतिले मजदूरलाई ध्यान दियो, तर कृषिलाई दिएन । प्रतिस्पर्धी कृषिका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । परनिर्भरता न्यूनीकरणका लागि एउटा अठोट गर्नु पर्छ ।
के हामीले निकासीलाई सबल अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सक्दैनौं ?
हामी निकासी गर्न सक्ने भएकै छैनौं । पहिला वस्तु निकासीको कुरा गर्थ्यौं । अहिले जलस्रोतको कुरा आइरहेको छ । हामी काल्पनिक संसारमा छौं । बिजुली निकासीको कुरा नै गलत छ । कति समयमा कति बनाउने भन्नेमै फरक कुरा आइरहेका छन् । अस्तिसम्म १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको कुरा थियो, अहिले २० हजार मेगावाट पुगेको छ । त्यसमा कति लगानी हुन्छ, खपत कहाँ हुन्छ ? १५ सय मेगावाटको मागमा ५ सय पनि बनाइएको छैन । सरकारले २५ वस्तु निकासीको योजना बनायो । तर, भएको केही छैन । बाहिर पठाउँदा गुणस्तरीय र तुलनात्मक सस्तो हुनु पर्छ । यसका विभिन्न कारक तत्व छन्, कसरी समाधान गर्ने ? निकासीमा सहुलियत त जान्छ, तर माल जाँदैन । सहुलियतले निर्यातलाई बढावा हुँदैन । घाटा भारतसित छ, सहुलियत अन्त दिइन्छ । कुरै मिलेको छैन । अदुवा, अलैँची र जडीबुटीको प्रशोधन किन भएन ? यसमा निजीक्षेत्र किन अघि सर्दैन ? कि त्यसमा सम्भावना देखिरहेको छैन । जसलाई निकासीयोग्य भनेका छौं, त्यसको सम्भावना छैन भन्ने पो लागेको छ कि ? त्यता वैदेशिक लगानीको ध्यान किन गएको छैन ? निकासी केको गर्ने ? वस्तुको कि सेवाको ? व्यापारघाटा कसरी घटाउने भन्नेमा अहिलेसम्म तात्त्विक छलफल भएकै छैन । अनुदान, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणले आयात धानेसम्म निकासी प्रवर्द्धनका कुरा नेतादेखि र विज्ञसम्मले सुन्छन् मात्र, काम केही गर्दैनन् ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक कूटनीति कस्तो हुनुपर्ला ?
हाम्रा अधिकांश अर्थराजनीतिक आयाममा परनिर्भरता देखियो । अहिले चीन र भारतको समदूरीलाई वैदेशिक नीति बनाइएको छ । तर, यसले काम गरेको छैन । असंलग्नता सार्थक बाह्य नीति होइन । यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । त्यो हाम्रो स्वार्थप्रेरित हुनु पर्छ । भारत र चीनका एजेण्डामा हामी लाग्नु हुँदैन । बरू शालीन नीति खडा गरेर उनीहरूको समस्या समाधानमा पहल गर्नु पर्छ । परनिर्भरता कम गर्न द्विपक्षीय निर्भरता हटाएर बहुपक्षीय बनाउनु पर्छ । विश्व बैङ्क, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय सहयोगमा जानु पर्छ । सहयोगभन्दा ऋणमा जोड दिनुपर्छ । कूटनीतिलाई विश्वव्यापी बनाउनु पर्छ ।
तपाईं सार्वजनिक र निजीक्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे जानकार मानिनुहुन्छ । विकासको निकट सरोकार निजीक्षेत्रसित पनि जोडिएको छ । तर, हामीकहाँ विकास योजनाको प्रभावकारिता अपेक्षित देखिएको छैन । यस्तो किन भएको होला ?
जनताका प्रतिनिधिले विकासका योजना सरकारको अगाडि ल्याउँछन् । तर, स्रोतसाधन पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने सक्षमता पनि हुँदैन । त्यसैले काम बिग्रिन्छ । कुनैबेला जमानामा बजेटमा उल्लेख भएका योेजना २५ वर्षसम्म पूरा भएका छैनन् । योजनाको छनोट महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विकास योजनामा स्थानीय सरोकारवालालाई पनि समावेश गरिनु पर्छ । यसो भयो भने त्यसको उपादेयतामा ऊ सचेत हुन्छ । अर्को, कुनै पनि योजनामा व्यावसायिक सम्भाव्यता हुनु पर्छ । कतिपयको सामाजिक फाइदा पनि हुन सक्छ । त्यसको पनि गणित हुन्छ । छनोट भएपछि पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । आवश्यक खर्च एकै पटकको बजेटबाट नछुट्याए योजना लम्बिन्छ । हामीकहाँ स्रोतसाधन बढाउने होइन कि योजना बढाउनेमात्र दबाब भयो । कार्यान्वयनमा दक्षता चाहिन्छ । यसमा निजीक्षेत्र प्रभावकारी हुन सक्छ । सबै काम निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन । सबै काममा सरकारी सहभागितालाई अस्वीकार गर्न पनि हुँदैन । सार्वजनिक–निजीक्षेत्र साझेदारी उपयुक्त मोडेल हुन सक्छ । योजनामा जनता पनि सहभागी भए उपयोगिता र छनोट प्रभावकारी हुन सक्छ । यसमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन । अब बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान यसमा जानु पर्छ ।
यसमा निजीक्षेत्र कुरामात्र धेरै गर्ने, तर अग्रसरचाहिँ नहुनेजस्तो देखिएको छ नि ?
पीपीपीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनेतिर सरकारको ध्यान गएन । निजीक्षेत्रलाई बढावा दिन केही कानून पनि बनाइयो । तर, त्यो ओझेलमा पर्‍यो । साझेदारी गराउने सरकारको सोच देखिएन । कतिपय विकासशील देशमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । तर, हामीकहाँ सरकारको सोच नियन्त्रणात्मक देखिएकाले यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसो हो भने सरकारलाई यो कुरा बुझाउने दायित्व निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाको पनि होइन र ?
बदलिएको अर्थराजनीतिक परिवेशसँगै अगाडि आएका चुनौतीको सामना गर्न निजीक्षेत्रका सङ्गठनले जुन तरीकाले आफूमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएन । समयअनुसारका कुरामात्र गरेका छन् । आर्थिक उदारवादको कुरा गर्ने निजीक्षेत्र पहिला आफैमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ । तर, अहिले पनि एकाधिकार र संरक्षणका कुरा सुनिन्छन् । अर्को, क्षमता विकास गर्नुपर्‍यो । निजीक्षेत्रको छवि समाजमा अहिले पनि त्यति राम्रो छैन । सरकारले पनि स्वच्छ छविको पहिचान दिन सकेको छैन । स्वच्छता र पारदर्शिताजस्ता कुरा निजीक्षेत्रको छवि उकास्ने विषय हुन् ।
भ्रष्टाचारले विकासको अवसर सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्ने पनि छ । निजीक्षेत्रले यो आवाज उठाएको सुनिन्छ । तर, यसमा एउटा मुख्य सहभागी निजीक्षेत्र क्षेत्र पनि हो । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
विकाससँगै भ्रष्टाचारको पनि विकास भयो । राजनीतिक तहमा विकासका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार छ । सरकारी लगानीको उत्पादकत्व नहुनुको कारण यो पनि हो । लगानीको केही अंश भ्रष्टाचारमा जान्छ । अर्को कार्यान्वयनको तहमा पनि भ्रष्टाचार छ । सरकारले दिने सेवाका लागि घूस दिनु पनि भ्रष्टाचारको अङ्ग हो । यसमा लिने र दिने पक्ष छन् । दिने नागरिक सेवाग्राही हुन्छ । त्यसमा उद्योग व्यापार क्षेत्रका सहभागीहरू पनि छन् । यसलाई कसैले पनि ठीक त भनेको छैन । नियन्त्रणका लागि ऐन कानून स्वविवेकीय नभएर स्वचालित हुनु पर्छ । कार्यान्वयनमा प्रविधि ल्याउनु पर्छ । यो नेपालमा सम्भव छ । तहगत नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया छ । ऐन कानून बन्दै छन् । यसकारण सजिलो पनि छ । यसबाट कार्यान्वयन तहको भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ । माथिल्लो तहमा नीति निर्माण र सरकारी लगानीको दुरुपयोगजस्ता कुरा सङ्घीयताले ठीक गर्न सक्छ । विकेन्द्रीकरण हुने भएकाले यो न्यूनीकरण हुन सक्छ । विकास निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता बढ्यो भने खबरदारी हुन सक्छ । मिडियाको सशक्त भूमिकाले पनि भ्रष्टाचार निवारणमा सघाउ पुग्छ ।
तपाईंले पर्यावरणमैत्री विकासको कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । औद्योगिकीकरणको युगमा यो सम्भव छ ?
पर्यावरणको विनाश विश्वकै समस्या भएको छ । औद्योगिकीकरण र खनिजको उत्खनन यसको मूल कारण मानिएको छ । चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजिलजस्ता देशको पर्यावरण विनाशमा यसकै भूमिका बढी छ । अन्य देशमा पर्यावरणमैत्री विकास असम्भवजस्तो देखिए पनि हामीकहाँको पर्यावरण अहिलेसम्म पनि त्यति दूषित भएको छैन । त्यति औद्योगिकीकरण पनि भएको छैन । भएकामा पनि प्रविधिले विकल्प दिएको छ । यसकारण हामीले अरू देशभन्दा फरक र पर्यावरणमैत्री विकास मोडेल अपनाउन सक्छौं । पर्यावरण दूषित नहुने गरी विकासको कल्पना गर्‍यौं भने नेपाललाई पर्यावरणीय प्रदूषणमुक्त देशको रूपमा ब्राण्डिङ गर्न सक्छौं । हामीलाई सगरमाथाले दिएजस्तै पहिचान पर्यावरणले पनि दिन सक्छ । त्यो आयको माध्यम पनि बन्न सक्छ । पर्यावरणलाई ब्राण्डिङ गरेर विकास मोडेल तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
युवाकेन्द्रित आर्थिक विकासमा तपाईंको धारणा के हो ?
नेपालको जनसङ्ख्यामा युवा बढी छन् । यो हाम्रो सबल पक्ष हो । यसको उपयोगका लागि युवाको पलायन रोकिनु पर्छ । विप्रेषणले तत्कालका लागि सरकार चलाउन सजिलो भए पनि यसले असन्तोषको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुम्चिने सङ्केत देखिइसकेको छ । यस्तोमा हाम्रो विकासले युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन भने त्यसको के अर्थ ?